कोरोनाका बि’रामीमा आयुर्वेदिक औ’षधिको परीक्षण प्रक्रिया सुरु – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोनाका बि’रामीमा आयुर्वेदिक औ’षधिको परीक्षण प्रक्रिया सुरु
काठमाण्डौ – कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचारका लागि आयुर्वेदिक औ’षधिको परीक्षण प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रदेश ५ का झण्डै एक सय जनामा आयुर्वेदिक औ’षधिको परीक्षणको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
परीक्षणका लागि सरकारले अनुमति दिइसकेको छ । यो औषधि सामान्य लक्षण देखिएकालाई दिने र त्यसपछि लक्षण र अस्पताल ब’साइ कति घ’ट्यो भन्ने हेर्नुको साथै र’गतमा केही परिवर्तन आए नआएको जाँ’च गर्ने डा. ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
जे’ठीमधु र त्रि’कटुको मिश्रण बनाएर तयार गरिएको यस आयुर्वेदिक औ’षधि बि’रामीलाई खाना खानुअघि खुवाउने उहाँले बताउनुभयो । मरीच, पिप्ली र सुकेको अदुवा बराबर मात्रामा मिलाएर त्रि’कटु बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तर त्यो औ’षधि ग’म्भीर स’मस्या देखिएकाहरुलाई नदिइने उहाँले बताउनुभयो । यो औ’षधिको कुनै पनि सा’इडइफेक्ट नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा कोरोना बाट निको भएर घर फर्क`नेको सं`ख्या २७ पुग्यो !!!